Kedụ ọnọdụ maka iji Carddebanye Kaadị Ndenye Mmụta? | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraKedụ ọnọdụ maka iji Carddebanye Kaadị Studentmụ akwụkwọ?
23 / 10 / 2019 06 Ankara, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Ụzọ Awara Awara, KENSİÇİ Rail Systems, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Metro, Turkey
Kedu ọnọdụ maka iji kaadị ndenye aha ụmụ akwụkwọ?
Kedụ ọnọdụ maka iji Carddebanye Kaadị Studentmụ akwụkwọ? : Ankara Obodo ukwu na-emejuputa ngwa kaadị ndenye aha maka ụmụ akwụkwọ. Studentsmụ akwụkwọ 20 na-erughi 2019 site na October 27 200 na-agba kaadị £ 60 na nloghachi.
ọma ịmụtaci Kedu ihe bụ iji kaadị ndenye aha?
1- Ngwa "Ndenye Ndenye Ego nke Isọnye" kwa ọnwa dị maka 27 na n'okpuru ụmụ akwụkwọ edebanyere aha ha na Ministry of National Education na Council of Higher Education.
2- Ntinye ego kwa ọnwa Dị ka n'ihe banyere ibute ego iji ruo ANKARAKARTI, a ga-ebo X XXX (ọnụ ọgụgụ ndị abanye 60 penny) n'otu oge maka 200 TL kwa ọnwa.
3- Egbọ njem EGO nke na-arụ ọrụ na Ntanye Ntinye Akwụkwọ Kaadị Mmụta Obodo Ga-adaba na akara ụgbọ ala, Ankaray na Teleferik (Publicgbọ njem nke onwe (ÖTA), Private Public Bus (ÖHO), Turkish State Railways Başkentray Suburban).
4- Enwere ike iji ndị nwere ego Student Student ANKARAKART dị ka kaadị ụmụ akwụkwọ ịdenye aha kwa ọnwa. Usoro ahụ ga-ebute kaadị 200 na-abanye na ntinye akwụkwọ kwa ọnwa. Nwa akwụkwọ ANKARAKART nwere ego ga-arụ ọrụ n'ahịrị na ụgbọ njem ọha na eze ebe a kwụsịrị ịbanye ikike 200 ma ọ bụ ikike ndenye aha anaghị adị irè.
5- Kaadị ndenye aha ụmụ akwụkwọ kwa ọnwa ga-adị ire site na ụbọchị ịzụtara we rue 23.59 n'otu ụbọchị nke ọnwa na-esote.
6- Kaadị ụmụ akwụkwọ na-edebanye aha ga-enye ohere maka nkeji 30 n'etiti ọdụ mbụ na nke abụọ n'otu ụgbọala na ọdụ. Ngwa ndenye aha agaghị adị ma ọ bụrụ na emebanye nke abụọ n'ime nkeji 30.
Usoro Ndenye aha nwata akwụkwọ:
- 20 nwere CREDIT kaadi si Kioks nwere ike ibu ya site na October 2019.
- Enwere ike ịme ntinye aka na ntinye aka na 20 dika nke October 2019 site na Ogige Nhazi Kaadị (Kız Cardlay, Akköprü, Dikimevi, Beşevler na EGO General Directorate).
Kedu ụdị ụdị Sigma?
Kedu ụdị atụmatụ nke Ankaray na Ankara Metro?
Kedu ọrụ na ike nke Board nke TCDD Transportation Inc. (Special News)
Kedu ihe bụ Njirimara Sigma Aluminom?
Kedu ihe nmetụta nke ihu igwe na njem
Kedu otu esi zụọ Tiketi Train Kedu ihe bụ ụzọ?
Ndị ọrụ TCDD na-arụ ọrụ n'agbanyeghị ọnọdụ siri ike
TCDD 191 Staff Officer Ụbọchị Ịzụ na Ngwa Ngwa
Obodo Erzincan na-agbanwe ihu igwe na ọnọdụ nsị
A na-ewepu Ọnọdụ Obodo Goreme Valley National Park maka Nnukwu Ọgbọ Dị Ugo?